IMount Cook: izici, ukwakheka komhlaba, isimo sezulu kanye nokuhlukahluka kwezinto eziphilayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngentaba ephakeme kunazo zonke etholakala eNew Zealand futhi enokuphakama kwamamitha angama-3770 ngaphezu kogu lolwandle. Imayelana ne- Mount pheka. Kuyisiqongo seNew Zealand Alps esakhiwe ngochungechunge lwezintaba eziwela lonke ugu olusentshonalanga nesiqhingi esiseningizimu yeNew Zealand. Ngaphezu kokuba yindawo enhle yezivakashi, iyindawo ethandwa kakhulu ngabagibeli bezintaba abahamba phambili abavela kuwo wonke umhlaba. Kube yindawo yangaphandle yezigcawu zama-movie ezaziwa kakhulu njenge-Lord Of The Rings.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi ngeMount Cook nezimpawu zayo.
2 Isimo Sezulu Sentaba Cook
3 Ukutholwa kweMount Cook
Itholakala ngaphakathi kwe-Aoraki-Mount Cook National Park. Leli paki lavulwa ngo-1954 futhi lahlonishwa njenge-Unesco njengeGugu Lomhlaba. Leli paki lineziqongo ezingaphezu kwezingu-140 ezingaphezu kwamamitha angu-2.000 72 ukuphakama nezinguzunga zeqhwa ezingama-XNUMX ezihlanganisa uhhafu wayo yonke le ndawo. Yonke insimu yaleli paki ingamakhilomitha-skwele angama-700.
Ukufinyelela kule ndawo kwenziwa njalo ngomgwaqo iMount Cook. Lo mgwaqo wenziwa ngonyaka we-2010 ngemuva kocwaningo olukhulu lomthelela wezemvelo. Wonke lawa ma-Alps aseNew Zealand akhiwa ngenxa yengcindezi yethectonic eyadala ukushayisana kwepuleti lasePacific kanye ne-Australia Indo-Australia. Lezi zingcwecwe ezimbili zethectonic zazinomphetho wokuhlangana ofana nalo lonke ugu olusentshonalanga yesiqhingi. Inqubo yokudonswa kwetectonic plate iyaqhubeka nokufika eMount Cook ngesilinganiso esingu-7 mm ngonyaka. Yize ijubane lokuhamba lingabalulekile kubantu, ezingeni le-geological kuyafaneleka
Yonke le ndawo ishaywe ukuguguleka ngamandla okubumba futhi kulolonge izintaba. ENtabeni uCook sibona isimo sezulu esibi ngenxa yesenzo esiqhubekayo semimoya enamandla nengxenye yasentshonalanga ebizwa ngemimoya ebhongayo. Le mimoya ivunguza ngama-degree angama-45 eningizimu.
Isimo Sezulu Sentaba Cook
Njengoba sishilo ngaphambili, le ntaba inesimo sezulu esingesihle esinezimo ezithile ezimbi kakhulu. Lezi zimo ezeqisayo ziheha kakhulu kubo bonke abagibeli bezintaba abafuna ukunqoba izinselelo. Futhi ukuthi imimoya yolwandle yaziwa ngegama le- AmaRighties Forties futhi abangela umphumela omkhulu weFöhn endaweni. Ngenxa yalomphumela, kukhiqizwa amazinga emvula aphakeme kakhulu angama-7.600 mm ngonyaka. Ngenxa yalezi zimvula eziphakeme kangaka, amahlathi asezindaweni ezishisayo angakhula ogwini ondliwa izinguzunga zeqhwa.
Ukutholwa kweMount Cook
Le ntaba yatholwa ngabaseYurophu. AbaseYurophu abakhulu kumele babheke u-Abel Tasman ngoJanuwari 11, 1643. Kwenzeka ngesikhathi ehlola iPacific futhi leli gama labekwa entabeni nguKaputeni John Lort Stokes ngo-1851 ukuhlonipha uKaputeni James Cook owayengowokuqala ukuhlola ngokokuqala ngqá iningi leziqhingi zaseNew Zealand ngonyaka we-1771. Khumbula ukuthi le ndoda ayiyibonanga intaba ngesikhathi ihlolwa.
Ngenxa yokubaluleka kwezinganekwane ze-Aoraki Mount Cook kwaba ngeyokuqala kulawo magama akhiwa lapho igama lamaMaori lilandela khona isiNgisi. Esinye sezizathu esenza ukuthi le ntaba yaziwe kakhulu kungenxa yesidingo sabantu abagibela izintaba kusukela ekuqaleni. Umzamo wokuqala wase-Europe wokufinyelela esiqongweni seMount Cook wenziwa nguMfundisi wase-Ireland uWilliam S. Green, ihhotela laseSwitzerland u-Emil Boss kanye nomhlahlandlela wezintaba waseSwitzerland u-Ulrich Kaufmann ngo-Ephreli 1883 ngamachilo eqhwa ngoMashi 2 ka-1882 yiTasman and Linda glaciers , Umdali kaHugh Logan we Umqondisi waseMount Cook ucabanga ukuthi bahlala ngaphansi kwamamitha angama-50 ukusuka phezulu.
Ingozi yokuqala lapho umgibeli wezintaba afela khona kulesi siqongo kwenzeka ngo-1914 ngoFebhuwari 22. Kulesi senzakalo, abagibeli abathathu bakhukhuleka ngedlanzana elivela eLinda Glacier.
Njengoba kulindelwe kulolu hlobo lwendawo lapho izimo zezemvelo zimbi kakhulu kunenani lezimbali nezilwane. Uma sibheka ukuthi njengoba sikhuphukela phezulu siyehla emazingeni ezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, iMount Cook inezinhlobonhlobo eziningi zezinto eziphilayo ezingaphansi komkhawulo wezimila zemithi. Futhi ukuthi uhlaza ludinga izimo ezanele zemvelo ukuze lukwazi ukuthuthukisa futhi lube nezilwane inkampani leyo.
Njengoba sithambekele ekuphakameni, izimo zemvelo ziba zimbi kakhulu futhi zibe zimbi ekukhuleni kwalezi zidalwa eziphilayo. Amazinga emisebe yelanga, izinga lokushisa, amazinga aphansi engcindezi, i-slope kanye ne-geology yendawo ayikusizi kangako ukukhula kwezitshalo. Uma uhlaza lungeke lukhule kuqala izinga leketanga le-trophic okungabathengi abakhulu noma izilwane ezidla imifino. Ngokusobala, ngaphandle kwalaba bathengi bokuqala, abathengi besibili kanye nezilwane ezidla ezinye abakwazi ukusinda. Ngezimo eziqinile zezemvelo uchungechunge lokudla alukwazi ukukhula futhi kuncane kakhulu ukwehlukahlukana.
Ngakho-ke, iningi lepaki likazwelonke lingaphezu komkhawulo wezimila zemvelo. Izimbali zakhiwa ikakhulukazi izitshalo zase-alpine iRanunculus Lyall, iButtercup enkulu kunazo zonke emhlabeni, ama-daisy amakhulu, namakhambi ahlukahlukene. Izinhlobo zezinyoni ezitholakalayo yiKea nePipit, phakathi kokunye. Ungabona futhi iTahr, inyamazane ebomvu, ne-chamois.
Ipaki ithandwa kakhulu ngabantu baseNew Zealand. Abantu abaningi baya lapho ukuyonyuka izintaba, ukushushuluza noma ukuzingela. UMnyango Wezemvelo uphethe ipaki.
Njengoba ukwazi ukubona, iMount Cook iyindawo eheha izivakashi kusukela indalo futhi inselelo yabaqokeleli bezintaba ayinakuqhathaniswa. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeMount Cook nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » Mount pheka